संगीतकार बिशाल काल्तेनको ‘झएदा घोर्की तामञ’ बोलको गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित) « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
संगीतकार बिशाल काल्तेनको ‘झएदा घोर्की तामञ’ बोलको गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)
३० कार्तिक २०७७, आईतबार ००:००
काठमाडौ : आज काठमाडौको जोरपाटीस्थित छिमेकी क्याफेमा एक कार्यक्रम बिच तामाङ चलचित्रका महानायक नायक अमिर दोङ्गको सभापतित्वमा एवम् तामाङ समुदायका वरिष्ठ गितकार तथा सङ्गितकार चन्द्रकुमार दोङको प्रमुख आतिथ्यतामा झएदा घोर्की तामञनामक म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो।
हेर्नूहोस् पूरा भिडियो …
क्रसबीट : जसपा नेतृत्वको मन्त्रालय, लथालिङ्ग सचिवालय ! (भिडियो)
NT Live : बाढी आउनु पुर्व के छ ? सुनसरीको तयारी ! (भिडियो)
हो, कानूनी झमेलाका कारण अब म मुलधारको राजनीति गर्न पाउँदिन : जेपी गुप्ता
मेलम्ची बजार तहसनहस, दुईतल्ले घर पूरै डुब्यो ! हेर्नुस् Live भिडियो